Fa zakaina ny tan-dalàna, fanjakana tan-dalàna… | NewsMada
Fa zakaina ny tan-dalàna, fanjakana tan-dalàna…
Ny olo-mody tsy arahi-maso? Na izany aza, tsy maintsy jerena ihany aloha ny lasa. Mba tsy hiverina intsony. Tsy iza na tsy inona fa izay tsy mahomby, tsy matotra, mitsapatsapa lava… Nahoana? Tsy manaja lalàna tsinona, tsy mahatanteraka ny teny nomena… Teo tsy manitra, lasa vao mamerovero?
Rehefa tsy nahitsy ihany, hono, ny lalàmpanorenana, mila hajaina ny lalàna velona. Angaha, tsy efa tokony ho izany moa hatramin’izay? Ny lalàna dia lalàna, fa tsy hoe tsy hajaina izay nokasaina ovaina. Na nony tsy tanteraka ny fikasana tamin’ny paipaika sy ny kajikajy politika, vao hoe hajao ny lalàna.
Tsy nifandroritana sy nifampiandrasana kendry tohina mandrakariva ve ny amin’izay hoe fanajana sy fampiharana lalàna izay? Saika natao na nadika ho amin’ny tombontsoan’ny tena na amin’izay mahametimety ny tena tsinona… Tsy nisy fampiharan-dalàna nandeha ho azy, fa nitarazohana hatrany.
Saika nandeha any amin’ny tsy izy hatrany aza izany amin’ny farany, raha tsy nisy ny fanaraha-maso akaiky, ny fahasahiana mamaky bantsilana ny tsy ara-dalàna, ny fitsikerana sy fitarainana ary fitoriana; eny, hatramin’ny fidinana an-dalambe aza. Tamin’ireny, izay mitaky fanajan-dalàna indray no diso.
Nampiteny ny moana sy nampitampim-bava ny afa-miteny ny tsy fanarahan-dalàna tamin’iny lasa iny, na inona fanamarinan-tena sy fandokafan-tena. Tsy noho ny tsy fanajan-dalàna ve no nahatonga izao fifidianana mialoha ny fotoana izao? Eny, na naroso 18 andro fotsiny aza izany: efa tsy ara-dalàna?
Ny didin’ny HCC noho ny tsy fanarahan-dalàna tamin’ny tsy nananganana ara-potoana ny Fitsarana avo (HCJ) no nahatonga izao. Raha mikafiry fahefam-panjakana, mbola nahazo 18 andro raha nanaja lalàna? Tokony ho amin’ny 25 novambra ny fifidianana, fa naroso ho amin’ny 7 novambra.
Hanao ahoana ny ho avy? Na ahoana na ahoana, ny tena ihany no ifoteran’ny fivadibadihana lava amin’ny fanarahan-dalàna. Atao injainjay arakaraka izay mahametimety ny tena ho amin’ny tombontsoa manokana? Fa zakaina ny hoe tan-dalàna, raha tena fanjakana tan-dalàna… tsy mivadibadika.